४ भाइ छोरा छन् तर आमा-बाउको यस्तो बि’ जोग हुँदा पनि फर्केर हेर्दैनन्, भन्छन् रे ”बा को मुख देखे साइत बिग्रन्छ !”-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित ) – Ap Nepal
४ भाइ छोरा छन् तर आमा-बाउको यस्तो बि’ जोग हुँदा पनि फर्केर हेर्दैनन्, भन्छन् रे ”बा को मुख देखे साइत बिग्रन्छ !”-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
सामाजिक मान्यताहरुमा एवं जीवनशैलीमा तिब्र परिवर्तन आइरहेको छ । जसका कारण पुरातन मान्यताहरुको उपेक्षा भइरहेको छ र समाजमा पारिवारिक संस्कार र संस्कृतिहरु भत्किन थालेका छन् ।
कुनै समय थियो पिता(बुवा) लाई देवता तुल्य मानेर पुत्र(छोरा) उनको सेवामा आफ्नो सबैकुरा अर्पण गर्न तयार हुन्थे । पिताले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई भक्तको समान प्रेम गर्थे र सबै भाइहरुबीचमा समान भाव राख्थे ।
पारिवारिक समस्या वा सन्तान र आमा–बुवाबीचको समस्या बढ्नुमा दोष एक जनाको मात्र हुन्छ भन्ने होइन ।
पछिल्लो समय संयुक्त पारिवारिक संरचनामा समस्या बढिरहेको छ । जन्मदिने आमाबुवालाई बृद्धाश्रममा राखेर आफ्ना सन्तानबाट भविष्यमा आफूलाई राम्रो गर्ने अपेक्षा गर्ने नयाँ र आधुनिक पुस्ताको संख्यामा समेत बढोत्तरी भइरहेको छ ।
पिता–पुत्र सम्बन्धमा दरार आउनुमा वास्तुविज्ञानको समेत दोष रहने बास्तुशास्त्रीहरुको तर्क रहेको छ । तर आमाबुवासँगको छोराछोरीको सम्बन्धमा समस्या आउनुमा वास्तुशास्त्र भन्दाबढी संस्कार, व्यवहार, माया, स्नेहको प्रभाव हुन्छ ।
पारिवारिक कलह बढ्नुमा वा समस्या उत्पन्न हुनुमा विशेष गरेर बुवा छोराको सम्बन्ध कारक बन्ने गरेको छ । छोरीहरु विवाह गरेर अरुकै घरमा जाने हाम्रो संस्कार संस्कृति र परम्परा भएपछि आमाबुवाले छोरा बुहारीबाट अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक पनि होइन ।
आमाबुवाले सन्तान(छोरा)बाट राख्ने अपेक्षा र छोराले आमाबुवामाथि गर्ने व्यवहारले पारिवारिक तनावको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
हिन्दू परिवारमा विवाहिता महिलाबाट उत्पन्न भएको पुलिंग सन्तानलाई पुत्र भनिन्छ । पुत्रलाई छोरा भन्ने गरिन्छ ।
पुत्रको प्रारम्भिक अर्थ लघु अथावा सानो हुन्छ । ‘पुत्रक’ शव्दको अर्थ वा सम्बोधन आफू भन्दा सानो मानिसलाई माया युक्त रुपमा गरिने सम्बोधन हो ।
यो शब्दको धार्मिक व्युत्पत्ति तर्फ जाने हो भने पुत्रको अर्थ ‘पुत=नरकबाट, त्र=बचाउने वाला’ भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात्– पुत्रबाट पिता तथा अन्य पितृको उद्धार हुन्छ यसकारण पितृलाई नरकबाट उन्मुक्त गर्ने पात्र पुत्र हो भन्ने धार्मिक मान्यता रहन्छ । धर्मशास्त्रहरुमा १२ प्रकारका पुत्रहरुको व्याख्या गरिएको छ ।
के चाहन्छन् आमा–वुवा ?
आमाबुवा जसले आफूलाई सकाएर सन्तानको हेराचाह र लालन पालन गरेका हुन्छन् । आफू नखाएर सन्तानलाई खुवाउँछन् र आफूले पीडा सहेर सन्तानलाई सुख दिन खोज्छन् ।
यस्तै एउटा भिडियो केहीदिन यता भाइरल भैरेको छ । जहाँ आमाबुवाको रोधनले सबैको मन रूहाएको छ।
बुवा आमा रूधै भन्छन् ४ भाइ छोरा छन् तर आमाबाउको यस्तो बिजोग हुँदा पनि फर्केर हेर्दैनन्, बा को मुख देखे साइत बिग्रन्छ रे !
Prevटेलिभिजन छाडेका रवीको भिडियो मार्फत सबैमा यस्तो आग्रह (भिडियो सहित)
Nextआहा ! कति मिठो स्वर , बुवाले सानैमा छोडेर भागे , भिरमा फुलेकी प्रितीको जादुमय स्वर (भिडियो सहित)